FBC - Warshaan Biqila Asallaa bu’a qabeessummaa fi carraa hojii uumuuf ni hojjeta jedhame
Warshaan Biqila Asallaa bu’a qabeessummaa fi carraa hojii uumuuf ni hojjeta jedhame
Finfinnee, Ebila 5,2010(FBC) -Warshaan Biqila Asallaa Federeeshinii Waldaalee Hojii Gamtaa Qonna Oromiyaaf dabarfamuun isaa federeeshinichi humna guutudhaan akka hojjetu isa gargaara jedhame.
Bu’a qabeessummaa federeeshinichaafis ga’ee olaanaa kan qabaatu ta’uun amanameera.
Warshichi bara 2009 humna isaa guutudhaan osoo hin hojjetin bu'aa qulqulluu Birrii miiliyoona 100 fi miiliyoona 25 argamsiisera.
Bara 2010 ji'oota 8n darbanitti qofa bu'aa Birrii miiliyoona 80 ol argateera.
Daayreektarri warshichaa obbo Abarraa Mokonnin Faanaa Broodkaastiing Koorporeetitti akka himanitti warshicha karaa federeeshinichaa kan qonnaan bultoota naannichaa ta'uunsaa hanqina dhiyeessii oomisha dheedhii isa mudataa ture fura jedhan.
Humna isaa guutudhaan wayita hojjetummoo bu'aa kanaa olii argachuun, qonnaan bultoonni garbuu biiraa oomishan oomisha isaanii gatii gaaridhaan akka gurguratanii fi bu'aa warshichaas akka qooddatan taasisa jedhan.
Maallaqa warshichi ittiin bitame Birrii biiliyoona 1.3 ol keessaa %35 kaffalamuu kan dubbatan hoji raawwachiistuu olaantun Aaddee Askabbarach Balaayinah gama isaanitiin kaffaltii hafe sheerii qonnaan bultoonni, waldaaleen hojii gamtaa fi yuuniyeenonni bitan irraa argamuun kaffalama jedhan.
Qabeenya qonnaan bulaa naannichaa kan ta'e warshaan kun qonnaan bultoonni gatii oomisha isaanii kanaan dura warshichaan murtaa’aa turee fi qonnaan bultoonni garbuu biiraa dhiiyeessaa turan komatan hafee gatii oomisha isaanii ofumaa akka murteeffatan isaan taasisa jedhu.
Warshichi dargaggoota naannotti argamaniif bal’inaan carraa hojii uumuuf xiyyeeffannaan ni hojjeta jedhameera.
Bizu'aalam Beenyatu gabaase.
Oduuwwan Biroo « Dhaabbilee seeran ala shaqaxoota bu’uuraa raabsaa turanirratti tarkaanfin fudhate	Dhaabbileen Mootummaa afur gara dhuunfaatti naanneffamuufi »